सबै युवाहरुलाई लठ्ठै पार्ने यी सुन्दर युवती को हुन् ? हेर्नु`होस्….
March 8, 2020 16393
पछिल्लो समय सा:माजिक संजालमा नेपाली मंगोलि’यन जस्ती देखिने एक युवती’को तस्बिर भाईर’ल भईरहेको छ । ति युवती वास्त’वमा नेपाली नभएर म्यान’मारकि एक मोडेल तथा नायि’का मेपञ्ची हुन् । जसको अनुहार नेपा’ली मंगोल समुदा:यका युवती ज’स्तै देखिन्छिन् ।
उनको सुन्दरतालाई नेपाली युवा’तिले नयां मोडल भन्दै दुरुपयो’ग गरिरहेका छन् । उनलाई नेपाली कलाकार भन्दै केहि फेसबु’क प्रयोगकर्ताले लाईक बढा’उन उनको तस्बिरहरु समेत दुरुप:योग गर्दै आईरहेका छन् । मेपञ्ची नाममा थुप्रै नेपाली आई’डिहरु खोलिएका छन् ।
कत्ति त नेपाली नै भनेर झुक्किने गरेका छन् । उनको तस्विर हेर्दा धेरै नेपाली:लाइ विदेशी नागरिक भन्दा पत्या’उन गाह्रो हुन्छ । नव नेपाली मोडल भन्दै एक विदेशी मोडल&का तस्वीर’हरु यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइ”रल बनेका छन् । वास्तवमा यी मोडल’ म्यानमा’रकी हुन् । बाबुले नको नाम परिव:र्तन गर्दै मेपञ्ची मात्र राखेका छन् ।
उनी मेपञ्चीले नै परिचित छन् । मेपञ्ची’को अर्थ हो मिस पेन्टर हो । उनका बा’बुले उनलाई पेन्ट:र बनाउने सोच पालेर सायद उनको नाम मेपञ्ची राखिए’को हुनुपर्छ । त्यसैले उनी कलाका’रितासँगै पेन्टिङ पनि गर्छिन् । उनी मोडलि’ङसँगै अभि’नयमा समेत जमेकी कलाका’र हुन् । हेर्दा नेपाली लुक्स देखिने उनी निकै सुन्दर र बोल्ड छिन् ।
त्यही भएर पनि उनला:ई नव नेपाली मोडल भनेर प्रचार’बाजी गरिएको हुनसक्छ । उनको तस्वीर राखेर सामाजि’क सञ्जालमा धेरै फेक अका’उण्टहरु समेत खोलिए’का पाइएका छन् ।म्यानमार’कि भाईरल मोडल तथा नायिकाको नाम मेपञ्चि सो नायुङ हो ।
उनको बुवा नायङ ले मेपञ्ची’को नाम परिवर्तन गर्दै मेपञ्चि राखेका हुन् । म्यानमार भा’षामा मेपञ्ची भने’को मिस पेन्टर हो । उनको सपना कलाकार र पेन्टर बन्ने थियो । त्यसैले उन:को बुबाले नाम मेपञ्चि राखिदिए’का थिए ।
उनि पेन्टर¸नायिका पनि हुन् तर, मोडल’मा भन्दा बढि नायिकामा छवि बना’उन सकिन् । उनले कमेडि सिरिय’लमा पनि अभिनय गरेकी छिन् ।
Prevब्रिटिश आर्मीमा जुम्ल्याहा दाजुभाइ भर्ती [हेर्नुहोस्]
Nextअष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी पनि कोरोना भाइरस’बाट संक्र मित’
यी आस्था खन्नाः जो चलचित्रमा ‘ यौ`न दृश्य निर्देशन गर्छिन् ’
‘आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ वर्षिय युवती’ यति भएपछि केटा’लाई के चाहिन्थ्यो र !
आज डलर सहित अन्य विदेशी मुलुकको मुद्राको भाउ यस्तो छ :